Galmudug: Ciidamo gaaray deegaan dil ka dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug: Ciidamo gaaray deegaan dil ka dhacay
Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Galmudug ayaa gaaray deegaanka Xirsi Lugey oo shalay lagu dilay 7 ruux oo shacaba.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Ciidamo ka kala tirsan Qaybta 21aad iyo Guutada Gorgor, ayaa oo ka ambabaxay Dhuusamareeb, ayaa gaaray deeganka Xirsi-lugeey ee duleedka degmada Balanbale.
Ciidamada waxaa hogaaminaya Taliyaha qaybta 21aad Col Cali Dheere iyo Taliye Gasaawe, waxaana ay howlgallo lagu baacsanayo Malleeshiyaadkii dilka ka gaystay ka sameynayaan deeganka Xirsi-lugeey ila dagmada Balabbale ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud.
Waxaa lagu soo warramayaa sidoo kale in wufuud kala duwan oo heer Wasiirro ah ay maanta ku wajaahanyihiin dagmooyinka Balanbale iyo Guriceel, kuwaasoo ka qayb qaadan doona aaska iyo dejinta xiisadda ka dhalatay dilka dadka shacabka ah.
Odayaasha Dhaqanka gobolka ayaa dowladda Farmaajo ku eedeeyay inay dilka ka dambeyso, waxayna ku baaqeen in Cadaaladda la horkeenno askarta DF ee dilka geystay.
0 Comments Topics: galgaguud galmudug soomaaliya